LibreOffice Office Suite: Ihe ntakịrị nke ihe niile iji mụtakwuo banyere ya | Site na Linux
Dị ka anyị niile maara nke ọma, ndị LibreOffice Office Suite bụ sọftụwia kwalitere, mepụtara ma jiri nke ọma Free Software, Open Source na GNU / Linux Community; ma e wezụga ịbụ, ọrụ nke nzukọ na-enweghị uru, akpọrọ: Akwụkwọ ederede.
Ọzọkwa, na ọ dị ugbu a, maka oge a (12/2020) na mbipute 6.4.7 maka gi nkwụsi ike (nke ka bụ ngalaba) na 7.0.3 mbipute maka gi ohuru (ohuru). Bụ nke ikpeazụ a akpọrọ ikpeazụ ya nnukwu igba egbe, lekwasịrị anya na-enye mma arụmọrụ, mma ndakọrịta, na ọtụtụ ọhụrụ atụmatụ mma gị arụpụtaghị.
Maka ndị chọrọ inyocha ndị ọzọ Ederede gara aga metụtara LibreOfficeMgbe ị gụchara akwụkwọ a dị ugbu a, anyị kwadoro ihe ndị a:
"LibreOffice development team kwuputara n'izu a nke ọnwa Disemba, nnweta nke beta mbụ nke LibreOffice 7.1. Versiondị ọhụrụ a na-agbakwunye atụmatụ ọhụrụ na ngwa dị iche iche nke mejupụtara ụlọ ọrụ ihe mepere emepe, yana ụfọdụ mmelite arụmọrụ". Akpa beta LibreOffice 7.1 dị
Akpa beta LibreOffice 7.1 dị
LibreOffice 7.0 biara na otutu ndozi ndozi DOCX, XLSX, PPTX na ndi ozo
1.1 Gini bu LibreOffice Office Suite?
1.2 Ebee ka imuta ihe banyere LibreOffice?
Gini bu LibreOffice Office Suite?
Dị ka gị ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị, a kọwara ya dị ka ndị a:
"LibreOffice bu ulo oru di ike; ya interface dị ọcha na ngwá ọrụ dị ike na-enye gị ohere ịmeghe ihe okike gị ma mee ka arụpụta gị dị elu. LibreOffice na-etinye ọtụtụ ngwa na-eme ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ Free na Open Source kachasị ike na ahịa: Onye edemede, onye nhazi okwu, Calc, mpempe akwụkwọ mgbasa ozi, Mmetụta, onye editọ ngosi, See, ngwa ntinye anyị na flowcharts, Base, our database na interface na ọdụ data ndị ọzọ, na Math maka idezi usoro mgbakọ na mwepụ."
Ebee ka imuta ihe banyere LibreOffice?
Ma ndị na-agụ anyị anyị (Site Linux) Dị ka ndị na-agụkarị ebe nrụọrụ weebụ ndị ọzọ yiri ya, ha maara na weebụsaịtị anyị na-ezokarị aka LibreOffice (na Office Office ndị ọzọ) na ụzọ akụkọ na ọrụaka, ya bụ, na ọkwa ntọhapụ, atụmatụ na akụkọ, na mgbe ụfọdụ dị ka nke gị ndozi Ma ọ bụ ọ bụla nsogbu n’oge.
Agbanyeghị, anyị anaghị etinyekarị aka na ya, ya bụ, akụkụ onye ọrụ, nkọwa gbasara otu esi eme ihe n'ime ha, na nkenke, ịrụ ọrụ n'ụzọ kachasị mma. Maka nke a, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ike ịnọ na-eche mgbe niile: Ebe na kedu ka m ga-esi mata maka LibreOffice?
Iji zaa ajụjụ ahụ, n’akwụkwọ a anyị na-enye ndị na-esonụ njụ-ajụjụ njikọ nke mere na ha mezuo ebumnobi a nke mụta iji n'ụzọ ka mma karịa anyị hụrụ n'anya "LibreOffice Office Suite":
Enyemaka LibreOffice n'ịntanetị
Obodo obodo Spanish na Telegram
Ọwa gọọmentị na Spanish na YouTube
Ndị ọzọ na Spanish
Ndị ọzọ na in English
Dabere na otu ndị isi kwuru banyere Obodo LibreOffice na Spanish na Telegram, nke ugbua iwekota ihe fọrọ nke nta otu puku (1000) mmadụ n'aka ọtụtụ Mba ndị na-asụ Spanish, Ọ dị mma ịkọwa otu ihe ahụ, na dịka ndị ọchịchị ya si dị:
"Otutu amamihe, ihe omuma na oke vibes ka ekesara ma a bia LibreOffice (LO). Site na teknụzụ ruo na nkà ihe ọmụma emetụta ha na nkwanye ùgwù dị ukwuu na ọwa ahụ."
Na mgbakwunye, ọ dị mma ịkọwapụta na ụfọdụ ndị otu ya dị ọhụụ na ndị ọzọ nwere nnukwu ọganiihu, mana ha niile nwere nnukwu agụụ maka ya. Software Nwepu na ndi uku LibreOffice Office Suite.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" na «Suite Ofimática LibreOffice», kpọmkwem na ụfọdụ echiche, akụkọ na ndụmọdụ ntanetị; bụ nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » LibreOffice Office Suite: Otu ntakịrị ihe niile iji mụtakwuo banyere ya
Ignacio Alejandro Neumann Cerda dijo
Ekelere m gị n'isiokwu gị magburu onwe ya.
Oge mbụ m zutere ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'efu bụ Openoffice, na 2006.
Afọ 14 agafeela na agbanyeghị na m na-eji Libreoffice, enweela m ike inyocha nnukwu nzụlite ya. Ọ bụ m ụlọ maka ọrụ kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na ha na-eji Office arụ ọrụ m, enweghị m nsogbu ọ bụla iji nweta ụlọ a magburu onwe ya.
Daalụ nke ukwuu maka njikọ njikọ iji mụtakwuo.
Zaghachi Ignacio Alejandro Neumann Cerda
Ekele, Ignacio. Daalụ maka okwu gị. Obi dị anyị ụtọ na ọdịnaya ndị bipụtara abarala uru nke ukwuu ma na-atọ ụtọ.
QEMU 5.2 rutere na ndozi maka RISC-V, nchịkọta ihe na ihe ndị ọzọ